Dahir Geelle “Madaxdii aan la soo shaqeeyay ciil uma qabo, caay uma rabo, ceebeyna uma rabo laakiin…” | Jowhar Somali news Leader
Home News Dahir Geelle “Madaxdii aan la soo shaqeeyay ciil uma qabo, caay uma...
Dahir Geelle “Madaxdii aan la soo shaqeeyay ciil uma qabo, caay uma rabo, ceebeyna uma rabo laakiin…”
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Amb. Dahir Maxamuud Geelle oo dhowaan ku dhawaaqay inuu yahay Musharax u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2021 ayaa sheegay in aanu wax ciil ah u qabin Madaxdii uu la soo shaqeeyay.
Isagoo la hadlayay jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koofur Afrika ayaa sheegay inuu aaminsan yahay sababta ay Madaxda hada talada heysa wax uga qaloocdeen.
“Madaxdii aan la soo shaqeeyay, ciil uma qabo, caayna uma rabo, ceebeyna uma rabo, laakiin wixii ka qaloocday iyo sababta ay u qaloocdeen inaan ogahay baan aaminsanahay, koley qaladaadki hore kuma soo celin rabo, wallaahi aan ku soo celin rabin qaladaadki hore iyo meeshey caado ku lug beeli jirtay”ayuu yiri Dahir Maxamuud Geelle.
Mar uu ka hadlayay dadka dhaliilsan madaxda dowladda ama diidan in loo arko inay dalka cadaw ku yihiin ayuu xusay in taasi aanay macnaheeda aheyd inay dalka cadaw ku yihiin, balse laga yaabo inay berri xukunka qabtaan sida uu yiri.
“Gobolada dadka joogo, maamul goboleedyada, wasiirada iyo dadka adiga ku diidan, adiga hadduu ku diidan yahay dalka cadaw kuma ahan, waxaa laga yaabaa berrito inuu yimaado, sida adiga wax u maamuleyso si ka fiican uu u maamulo sidaas laga yaabaa, sidaas waxaa loo baahan yahay is aqbal ayaa waxaa isku soo noqon karaa oo dalka isla socoshadiisa ay ku jirtaa”ayuu yiri Dahir Maxamuud Geelle.
Amb. Dahir Geelle ayaa bishii May ee sanadkii tagay 2019 iska casilay xilkii Wasiirka Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya, iyadoo xilligaas sabab uga dhigay is casilaadiisa in madaxda dowladda iyo isaga ay ku kala aragti duwanaadeen arrimo badan, sidaas darteed uu go’aansaday inuu xilka ka dego.
Dadka falanqeeya arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in Amb. Dahir Geelle uu ka mid noqon doono Musharaxiinta ugu xooggan ee loolanka ugu jirta xilka Madaxweynaha Soomaaliya sanadka 2021.